Kubatanidza chinhu chinogadzirwa chinobatanidza miseve yemachina maviri akasiyana uye chinotenderera pamwechete panguva yekufambisa. Kazhinji kutaura, mukuita kwekubatanidza mashandiro, iwo miseve miviri haizove yakadzima, asi imwe yeiyo torque muganho basa rekubatanidza, mune torque yakakura kwazvo ichaita iwo maviri shaft kumhanya musiyano, kana kutobva pabasa. Iyo inozivikanwa zvakare inozivikanwa se "backrest vhiri" mukugadzirisa mashopu uye mafekitori.
Chinangwa chikuru chekubatanidza kusanganisa zvikamu zviviri zvinotenderera uye kushanda zvakajairika kunyangwe paine imwe nhanho yeaxial, angular kana kupera kusuduruka. Kusarudzwa kwakakodzera, kuisirwa uye kugadzirisa kwekubatanidza kunogona kudzora kukosha kwekuchengetedza uye nguva yekuzorora
Model 321 yakakamurwa flange's bhaudhi mabhuni akagadzirwa mugomba denderedzwa. ANSI Kirasi 125 & 150 uye PN16 giredhi flanges anowanikwa kwese kwese, iine DN50 kusvika DN80 (2 kusvika 3) kune ese PN10 mazita mazita flanges; DN100 kusvika DN150 (4 kusvika 6) kune ese maviri flanges PN10 mazita giredhi flange.
Isu tave nevatengi vanoverengeka vevashandi vakanaka pakushambadzira, QC, uye tichishanda nemhando dzematambudziko anonetsa panguva yegadziriro sisitimu yeTrending Zvigadzirwa China SAE BSPP Yakagadziriswa Flange ine Thread ye Hydraulic Cylinder, Tinogamuchira nemoyo wese vatengi kubva kune vese kumba kwako uye kunze kwenyika ku. zvinoita sekuchinjana kambani nesu.
Trending Zvigadzirwa China Hydraulic Flange, Flange Adapter, Mutungamiri nenhengo dzese dzekambani dzinoda kupa mhinduro dzehunyanzvi uye masevhisi evatengi uye nekugamuchira nemoyo wese uye nekushandira pamwe nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika kune ramangwana rakajeka.
Chigadzirwa Chigadzirwa Uye Kunyorera
Housing zvinhu: Ductile simbi kuenderana ASTM A-536, giredhi 65-45-12
• FM Yakagamuchirwa & UL Yakanyorwa: RWP yakarongwa kushanda kumanikidza 300PSI (2.065MPa / 20.65bars)
• Kubatanidza gasket zvinhu: EPDM (Inesarudzo: Nitrile NBR, Silicone nevamwe)
Mabhaudhi nemaNuts: Mabhaudhi anorapwa uye emagetsi mabhaudhi ane oval mutsipa, uye rinorema basa hexagon nzungu.Track musoro kusangana nemuviri uye zvemakemikari zvinodiwa zveASMM-449 uye zvemuviri zvinodiwa zveASMM-183.
Saizi Range: DN50 kunyangwe DN300 (2 ″ kunyangwe 12 ″)
Kununura, Kutumira Uye Kushumira
Ngarava kubva kuTianjin kana imwe Seaports
Pashure: Flange Adapter
Zvadaro: Heavy Duty Zvichienderana payakabatanidzwa 1000Psi